Apple Music waxay horey u laheyd 60 milyan oo macaamiil ah | Wararka IPhone
Apple Music waxay horey u haysatay 60 milyan oo isticmaaleyaal ah
Iyadoo ay jiraan cabashooyinka iyadoo Spotify salka ku haysa Apple waa xiisaha barnaamijyadan: adeegyada hoorinta muusikada. Balaayiin isticmaale ah ayaa adeegsada dib u soo celinta muusigga ee dhammaan barnaamijyada la heli karo, laakiin furaha shirkadaha ayaa ah ka qaybgal isticmaalayaasha astaamahaaga ilaa ay ka gaarayaan meesha ay doonayaan inay lacag ku bixiyaan si meesha looga tuuro.
Eddy Cue, madaxweyne ku xigeenka softiweerka iyo adeegyada internetka iyo madaxa iTunes, wuxuu ku xaqiijiyay warbaahin faransiis ah in Apple Music horey u haysatay 60 milyan oo macaamiil ah. 8 bilood ka hor, Nofeembar 2018, tiradaas ayaa qiyaastii jirtay 56 million.
Apple Music waxay kusii socotaa xawaare
Dagaalka si uu u noqdo kan loogu dhageysiga badan yahay adeegga muusigga ayaa marba marka ka dambeysa sii badanaya ceeriin. Si kastaba ha noqotee, xogta ayaa iska hadlaysa lafteeda. Waqtigan xaadirka ah, boqorka adeegyadan ayaa ah Spotify in ka badan 100 milyan oo macaamiil ah taas ayaa soo go'aysay tan iyo markii la bilaabay 2003. Dhinaca kale, waxaa jira Apple Music, oo ay haysteen 56 milyan oo macaamiil ah bishii Nofeembar ee sanadkii hore, laakiin shalay ayaa xogta lagu cusbooneysiiyey gacanta Eddy Cue, Tababaraha iTunes ee Apple:
Apple Music waxay leedahay 60 milyan oo macaamiil ah. Beats 1 waa idaacadda Apple Music waxayna leedahay in kabadan malaayiin dhagaystayaal ah maalin kasta.
Hadaladaas waxaa nala wadaagay Numerama, mid Faransiis ah oo Eddy Cue uu wareysi siiyay. Xogtan ka sokow, waxay ka hadleen Ka luminta iTunes ee raadinta kala duwanaanta waxyaabaha ku jira. Cue wuxuu xaqiijiyay in kasta oo uu rumeysan yahay in iTunes-ka uu yahay aalad wanaagsan oo uu isagu jecel yahay, haddana wuxuu u maleynayaa «Apple Music gabi ahaanba waa tan ugu fiican dhammaan dhinacyada ". Wuxuu sidoo kale faallo ka bixiyay in aysan jirin wax faa iido ah dib u fiirinta marka horumarka adeegyada ay aad u xumaayeen sanadihii la soo dhaafay.
Waxaa sidoo kale la weydiiyay - tirada macaamiisha bixiya ee ka baxsan nidaamka deegaanka ee Apple, taas micnaheedu waa, iyagu ma isticmaalaan Apple Music qalab leh iOS, tvOS ama macOS. Eddy Cue ayaa xaqiijiyay inuu garanayay tirada laakiin «Ma dhihi karo«. Waxaan rajeyneynaa mustaqbalka in xogtaan ay soo ifbaxdo waana falanqeyn karnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple Music waxay horey u haysatay 60 milyan oo isticmaaleyaal ah